Mandrava Ny Fahirano Ao Aleppo · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraLeila Al Shami
Voadika ny 03 Septambra 2016 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, عربي, English
“Nandritra ny andro nisian'ny ady goavana tamin'ny herinandro lasa, tao anatin'ny fanehoana fihantsiana mampalahelo sady mahatsikaiky, nandoro kodiarana an-jatony ny olona tao Aleppo, nahatonga setroka mainty teny amin'ny habakabaka mba hamoron'izy ireo No Fly zone (Faritra Tsy Azo Isidinana) araka ny fahafaha-manaony.” SARY: Sary niparitaka be tao amin'ny media sosialy.
Nosoratan'i Leila Al Shami
Nanao fankalazana ny olona ao tamin'ny faritra atsinanan'i Aleppo tamin'ny 6 Aogositra rehefa naharava ny fahirano napetraky ny fitondrana Syriana sy ny mpiara-dia aminy tao amin'izy ireo nanomboka tamin'ny 17 Jolay ireo mpikomy. Efa ho iray volana izay, nivadika ho fonja an-kalamanjana ireo faritra ao an-tanàna tazonin'ireo revolisionera hatramin'ny volana Jolay 2012, ka olona 300.000 no nanangona sakafo sy vatsy noho ny tahotra ho fatin'ny hanoanana.
Nitaky firaisantsaina lehibe teo amin'ireo mpikomy izany, noho ny fitaovam-piadiana vitsy kokoa eo ampelatanan'izy ireo handravana ny fahirano. Niaraka tamin'ny milisy Islamista, indrindra ny Jabhat Fatah Al Sham, izay fantatra amin'ny anarana hoe Mandan'i Al-Nusra, sampan'ny Al Qaeda ao Syria hatramin'ny fiandohan'ity volana ity ny nasionalista demokratikan'ny Tafika Syriana Afaka.
Nitaky firaisantsaina lehibe teo amin'ireo mpikomy izany, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana vitsy kokoa eo ampelatanan'izy ireo handravana ny fahirano.
Tsy dia taitra tamin'ny endrika vaovao ny fiarahamonim-pirenena Syriana amin'ny ankapobeny. Na dia nisoroka ny fametrahana hentitra ny lalàna Islamika tao amin'ny faritra izay misy azy aza ny Nusra, nisy ny fanoheran'ny mponina ny vondrona noho ny fikasany hanohintohina ny rafi-pitantanana sivily ao an-toerana, sy ny fametrahana rafitra mirazotra tahaka ny fitsarana Sharia. Nisambotra ireo mpikatroka ao amin'ny fiarahamonina sivily ihany koa ny Nusra, anisan'izany ny mpanao gazety sy ny mpikambana ao amin'ny vaomiera eny ifotony, ary efa tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ara-pivavahana ihany koa. Eny tokoa, nanao fihetsiketsehana nandritra ny dimy volana mahery ho fanoherana ny fandavan'ny Nusra hiatrika fitsarana mahaleo tena sy mitaky ny famotsorana ny gadra tazonin'ny Nusra ny revolisionera tao amin'ny faritanin'i Idlib, toeram-panafihana revolisionera goavana voalohany natao tamin'ny tafika Assadista.
Noroahin'ny fanerem-bahoaka ny Nusra tao Aleppo tamin'ny 2014, saingy niverina vao haingana. Nifandona tamin'ny vondrona mpikomy hafa izy, ary ny fikasany hanjakazaka amin'ny andrim-panjakana sy ny fanomezana tolotra tahaka ny herinaratra sy ny sakafo no nahatonga ny vondrona ho halam-bahoaka teo amin'ny mponina ao an-tanàna.
Saingy lehibe mihoatra noho ny fitsipika ara-politika ny fitakian'ny fiavotan-tena ho velona. Lasa mankalaza ny fandrosoan'ny dhijadista ireo demokraty maro – izay mihorohoro amin'ny fametrahan'ny djihadista lalàna. Singa manan-danja ao amin'ny Jaish Al al-Fath, Tafiky ny Fandresena, izay nanafaka ny tanànan'i Idlib teo am-pelatanan'ny fitondrana Syriana tamin'ny taon-dasa ny Nusra. Ny Jaish Al Fatah no nitarika ny fanafihana izay nandrava ny fahirano tao Aleppo.
Nanao fihetsiketsehana ho fanohanana ny valim-panafihana ny mponin'i Aleppo afaka. Nandritra ny andro nisian'ny ady goavana tamin'ny herinandro lasa, tao anatin'ny fanehoana fihantsiana mampihomehy sady mahatsikaiky, nandoro kodiarana an-jatony ny olona tao Aleppo, ka niteraka setroka matevina mainty teny amin'ny rivotra mba hamoronana ny No Fly zone (Faritra Tsy Azo Isidinana) azy ireo manokana. Vao maika mampitombo ny maha zava-dehibe ny Nusra teo imason'ny mponina ao an-toerana ny fahombiazan'ny fandravana ny fahirano. Izany no nateraky ny fandaozana.
Raha lavo i Aleppo, izay toa efa akaiky dia akaiky andro vitsy alohan'ny fandravana ny fahirano, tsy hampitsahatra ny ady izany. Saingy mety midika fahafatesan'ny revolisiona izay efa novadihana sy nilaozana. Maneho ny hetaheta hanohizana ny tolom-bahoaka ho amin'ny fahafahana nefa miha atao an-jorom-bala ny fanafahana an'i Aleppo.
“Raha lavo i Aleppo, izay toa efa akaiky dia akaiky andro vitsy alohan'ny fandravana ny fahirano, tsy hampitsahatra ny ady izany. Saingy mety midika fahafatesan'ny revolisiona izay efa novadihana sy nilaozana.”
Amin'ny fanohanana izay zara raha mihoatra ny am-bava avy amin'ireo lazaina fa naman'izy ireo any Andrefana, naharoaka ny didy jadon'i Assad ny vahoakan'i Aleppo tamin'ny Jolay 2012 ary naharoaka ny Daesh (ISIS) mahery fihetsika tamin'ny Janoary 2014. Ny distrika afaka ao atsinanana no nitantana ny raharaha[mpanjakan’] izy ireo manokana ary nitolona mba hanohy hiasa amin'ny fanomezana ireo servisy fototra amin'ny alalan'ny vaomiera ao an-toerana voafidy tamin'ny fomba demokratika . Niforona ny toerana iray ahitana vondrom-piarahamonim-pirenena lehibe indrindra ao amin'ny firenena, anisan'izany ireo vondrona haino aman-jery am-polony sy ny fikambanana vonjy taitra sy fanampiana maha-olona tahaka ny herim-Piarovana Sivily ‘Satro-Potsy’. Nisy vondrom-behivavy nanangana onjam-peo izay sambany vondrom-behivavy no tompony, Radio Naseem izany, izay miresaka momba ny olan'ny zon'olombelona, ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny revolisiona sy ny loza ateraky ny extremisma ny fandaharana. Ity no lovan'ny revolisiona, fanehoana ny foto-kevitra ara-demokraka sy ny faharetany, ary izany rehetra izany amin'izao fotoana izao no ezahina foanana ao anatin'ny daroka baomba.
Niaritra tifitifitra basy aman-tafondro, baomba amin'ny barika sy balafomba i Aleppo nandritra ny taona maro, saingy ny daroka baomba amin'izao fotoana izao no tena mafy indrindra hatramin'izay. Nodarohan'ny tafika an'habakabaka Rosiana na Syriana baomba imbetsaka ny hopitaly sy ny toby fonenan'ireo olona nafindra toerana. Nahatonga ireo olona an'arivony niala ny tranon'izy ireo ny fanafihana ataon'ny fitondrana sy ny mpiara-dia aminy amin'ireo faritra fonenana. Rehefa tsy mahita toerana haleha, dia maro ankehitriny ireo matory eny amin'ny tranom-panjakana na eny an-tokotany. Niniana nokendrena ny foto-drafitrasan'ny rano sy jiro sy ny trano fitsaboana. Nahatonga ireo tolotra tena ilaina sy iankinan'aina ho eo an-dalam-pirodanana ity heloka bevava an'ady ity. Manano sarotra ny fitsaboana ireo maratra isan'andro noho ny tsy fahampian'ny fanafody sy ny dokotera .
Ho valifatin'ny fahombiazan'ny mpikomy vao haingana, niharan'ny fanafihana an'habakabaka i Idlib, voalaza fa nisy ny fiaramanidina Rosiana mandatsaka baomba miteraka afo eny amin'ny faritra sivily. Omaly alina ohatra nisy ny tatitra fa niharan'ny fanafihana entona klaoro tao Aleppo fehezin'ireo mpikomy.
Amin'izany toe-javatra izany, hita amin'ny tena toetrany ny filazan'ny fitondrana sy ny Rosiana hametraka “lalantsara maha-olona’ ahafahana mandositra ny tanàna: fikasana handroaka ny vahoaka ao amin'ny faritra misy ny mpanohitra ary mampitandrina fa ireo izay mijanona ao dia lasibatry ny vono olona faobe mitranga ankehitriny. Mila hajanona ny daroka baomba ary mila avela hiditra ao an-tanàna ny fanampiana .
“Amin'izany toe-javatra izany, hita amin'ny tena toetrany ny filazan'ny fitondrana sy ny Rosiana hametraka “lalantsara maha-olona’ ahafahana mandositra ny tanàna: fikasana handroaka ny vahoaka ao amin'ny faritra misy ny mpanohitra ary mampitandrina fa ireo izay mijanona ao dia lasibatry ny vono olona faobe mitranga ankehitriny”
Manosika ho amin'ny fiarahamiasa goavana ara-miaramila miaraka amin'i Rosia ao anatin'ny “ady amin'ny fampihorohoroana” ankehitriny ny fitondrana Amerikana, izay tsy tena naman'ny tolom-bahoaka mihitsy hatramin'izay. Araka ny famaritan'i Rosia, dia tafiditra ao rehefa mpanohitra fitondrana. Toa mampiseho ity politika tsy mijery lavitra ity fa itokisana i Rosia hanery ny fitondrana hampitsahatra ny fanafihany ny vondrona mpikomy mahalala onony sy ny faritra tantanin'ny mpanohitra, na dia eo aza ny tsy fahombiazan'ny fitondrana sy Rosia hanaja ny fifanarahana natao momba ny fampitsaharana ny ady na fidirana amin'ny fanampiana maha-olona. Ny fomba fijery ny zava-misy dia miara-miasa amin'ny mpanafika ny Amerikana. Raha torotoroin'ny hery avy any ivelany sy ny milisy Shiita ara-pivavahana ny tafika demokratika manohitra ny fitondrana, hitombo an-toerana ny herisetra mahery fihetsika.
Tsy mila mirotsaka ara-miaramila ny Tandrefana hanohitra ny fitondrana na ny Daesh. Nahomby ny revolisionera Syriana tamin'ny fandresena azy ireo tamin'ny lasa ary afaka manao izany indray izy ireo. Saingy ilaina ny teritery ara-politika sy ara-toekarena ireo firenena izay manohana ny fitondrana (antony voalohany mahatonga ny fandatsahan-drà sy ny extremisma) mba hampitsaharana ny fanohanan'izy ireo. Tsy afaka hifehy ny tany irery i Assad ary miankina tanteraka amin'ny tafika avy any ivelany mba ho tafavoaka velona (fanafihana an'habakabaka ataon'ny Rosiana, sy ny milisy Shiita tohanan'ny Iraniana an-tanety). Niezaka mafy hanakarama gadra sy mpampianatra mba hiady ny fitondrana raha miezaka misoroka ny fandraisana miaramila sy fitsoahana an-daharana ireo tafika matoky ny fitondrana.
Satria may i Aleppo, ary avy eo noana, nampitony an'i Rosia sy Iran i Etazonia, mody fanina amin'ny djihadista Shiita ao Iran, nanakana tamin'ny vato tsy azo ivalozana ny hanomezana fitaovam-piadiana miady amin'ny fanafihana an'habakabaka tsy ho azon'ireo mpikomy ary tsy nahavita nanome fanohanana ampy ho an'ireo hetsika sivily demokratika. Etsy andaniny, nanome ny ràny mba hanavotana ny tanàna ny sampana teo aloha an'ny Al Qaeda. Ho goavana ny fielezana.
Leila Al Shami dia Britanika Syriana nandray anjara tamin'ny ady ho an'ny zon'olombelona sy ny rariny ara-tsosialy tao Syria sy tany an-kafa tao Afovoany Atsinanana nanomboka tamin'ny taona 2000. Izy no mpiara-mpanoratra ny “Firenena Andalam-pahamaizana: Syriana ao anatin'ny Revolisiona sy ny Ady” niaraka tamin'i Robin Yassin- Kassab, ary mpandray anjara amin'ny “Khiyana-Daesh, Ny tavela sy ny tsy natao tamin'ny revolisiona syriana”. Ny dika amin'ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny bilaoginy.